Madaxwayne Xasan oo Jawaab siiyey Puntland, kana hadlay Dagaalka magaalada Gaalkacyo +Cod | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Madaxwayne Xasan oo Jawaab siiyey Puntland, kana hadlay Dagaalka magaalada Gaalkacyo +Cod
Madaxweynaha Somalia Xasan Shiikh Maxamuud ayaa ka jawaabay eedeymaha sheegaya in ciidamo ka tirsan dowlada federaalka ay ka qeyb qaadanayaan dagaalka ka socda magaalada Gaalkacyo.
Xasan Shiikh ayaa sheegay iney aad ugu xun yihiin dagaalkaas, kuna dedaali doonaan sidii loo joojin lahaa, wuxuuna wax aan suuragal aheyn ku tilmaamayay dowladu ka qeyb qaadato ama huriso dagaal u dhexeeya labo dhinac oo shacabkeeda ka tirsan.
“Dagaalada ka dhaca Gaalkacyo waa kuwo taariikhi ah oo ka horeeyey Puntland iyo Galmudug, waxaad la socotaan heshiisyadii ay gaareen Madaxweynihii hore C/llaahi Yuusuf iyo Jen. Caydiid, waxayna dagaaladan salka la sii galayaan soona jireen illaa xiligii isticmaarka mana wax dowlada federaalka la kowsaday” ayuu yiri madaxweynaha Somalia.
Waxaa uu sheegay in dowladu federaalku ay wado qorsheyaal lagu joojinayo dagaalkan si loo soo celiyo nabadii ka jirtay magaalada Gaalkacyo, wixii muran ah ee jirana loogu dhameeyo wadahadal.
Maamulka Puntland ayaa dhowr jeer ku eedeeyey dowlada Somalia iney ka qeyb qaadaneyso dagaalka ka socda Gaalkacyo hub iyo ciidana ku taageereyso ciidamada Galmudug ee kula dagaalamaya galbeedka magaalada Gaalkacyo.